कास्कीको उप-चुनाव: जनता हारेनन | रुपान्तरण
कास्कीको उप-चुनाव: जनता हारेनन
१७ मंसिर २०७६, मंगलवार १६:२९
-कुसुम केशव पराजुली
देशभरी उपनिर्वाचनले तताएको राजनीतिक सरगर्मी अब शिशिरको सिरेटोसंगै सेलाउँदै जान लागेको छ । विजयी खुशी होलान र पराजितहरुलाई पीडाबोध होला । निर्वाचनका बेला भने गरेका तितामिठा कुरा बिर्सदै जाने क्रम छ । पक्ष प्रतिपक्षले यो उपनिर्वाचनबाट खासै भिन्न आशा गरेका होईनन । बिधिको शासन, बर्तमान सरकार र प्रतिपक्षका क्रियाकलापलाई नजिकबाट नियालेर हेर्दै गरेका नेपाली नागरिकले मतदान गरे । प्रतिशतका आधारमा उल्लेख्य मतदान होईन, जनताको निरासालाई ६५ प्रतिशत ननाघेको यो मतले परीक्षामा उत्रिएको प्राप्ताङ्क भन्न सकिन्छ । स्थानीय तहका निर्वाचनले बिकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पार्दथ्यो भने प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन पदपूर्ति सम्ममा सीमित रहन सक्ने देखिन्छ । एक मात्र प्रतिनिधि सभासदको निर्वाचन कास्की जिल्लाको क्षेत्र नम्बर दुईमा रह्यो । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त वा अन्य दलहरुको जोश जाँगर यहाँ देखियो ।
कास्की जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा भनेकै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) र नेपाली कांग्रेसको रह्यो । समाजवादी र राप्रपाका नामबाट आफ्ना बलिया उम्मेदवार उठाउने राजनीतिक दलहरुलाई पूरक प्रतिस्पर्धी भन्न सकिएला । कुनै दललाई बिजयी या पराजित गराउने उद्देश्यले अरु दलले प्रतिस्पर्धा गरेका थिएनन । आफ्नो अस्तित्व रक्षा र उपस्थिति देखाउन उनिहरुले भरमग्दुर प्रयास गरे । राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन परिणाम बारे समीक्षा आ-आफ्ना भित्र गर्दै रहलान् । नेकपाको ईतिहासमा बिद्या भट्टराई अधिकारीले नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधिका रुपमा बिजय हासिल गर्नु र नेपाली कांग्रेसका परिपक्व नेता खेमराज पौडेलले हार्नु परेको कारण बारे हामीले निर्वाचनको समीक्षा यसरी गर्न सक्छौं,
नेकपा (नेकपा) बिजयी हुनुको कारण :
मजबूत संगठन : कास्की जिल्ला पहिले देखि बामपन्थी प्रभाव क्षेत्र थियो । पटक पटकका निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बामपन्थी किल्ला नभत्काएको होईन ता पनि कास्की जिल्लाको यो क्षेत्र पार्टीको र पूर्व पर्यटन मन्त्री स्व. रबीन्द्रको उल्लेखनीय प्रभावमा रहेको हो । नेपाली कांग्रेससंग एक्लै भिडन सक्ने सामथ्र्य रहेको तत्कालीन एमाले र त्यस्मा थपिएको माओवादीसंगको एकतापछि यो लालकिल्ला नै सावित भयो । अन्य राजनीतिक दलहरुको तुलनामा यस क्षेत्रमा कम्युनिष्टहरुले आफ्नो सांगठनिक आधार बनाएर निर्वाचनमा सफलता हासिल गरे । पार्टी संगठन जति धेरै योजनाबद्ध ढंगले परिचालित भयो, उति जन परिचालनमा प्रभाव पर्दछ । त्यो शक्ति नेकपाले आर्जन गरेको देखियो ।
स्थानीय निकायमा जनप्रभाव : यो निर्वाचन क्षेत्र भएको ठाउँमा पोखरा महानगरका १० वडाहरु पर्दछन् । परम्परालाई आधार मान्ने हो भने बजारियाहरु कम्युनिष्ट बन्न हिचकिचाउंछन । गाँउमा कम्युनिष्टको दवदवा छ भन्ने गरिन्थ्यो । पोखरा महानगर भए पनि गाउँ मिसिएका वा भित्री शहर गाउँबाटै हुर्कदै गरेकाछन् । ती वडाहरुमा प्रायः कम्युनिष्टहरुले कब्जा जमाएका थिए । स्थानीय जनप्रतिनिधि भए पनि आफ्नो राजनीतिक दललाई बिजयी बनाउन उनिहरु लागि परे । स्थानीय निकायको प्रभावले गर्दा पनि कम्युनिष्टहरुलाई त्यहाँ बिजय हासिल गर्न सहयोग पुर्‍यायो ।
पार्टी पंक्ति पुरै परिचालित हुनु : निर्वाचनमा केन्द्र देखि टोलटोल सम्मका नेता कार्यकर्ता एकोहोरो परिचालित भए । केन्द्रीय स्तरका नेताहरुलाई वडा वडाको कमाण्ड दिनु, शिर्ष नेताहरु भन्दा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेताहरुको खटाई अहोरात्र हुनु, वडा कमिटी र केन्द्रीय नेतृत्वको समन्वय प्रभावकारी रहनु, पार्टी पंक्ति गुटबन्दीमा नलागि एकढिक्का हुनु कम्युनिष्टहरुको सबल पक्ष रह्यो । अघिपछि ओली गुट, माधव गुट वा प्रचण्डका अन्ध अनुयायी भनिए तापनि यो निर्वाचनमा उनिहरु एकढिक्का भए ।
निजी स्वार्थ भन्दा माथी उठनु : निर्वाचनका बेला आफ्नै दल वा समूहमा निजी स्वार्थका कुरा राख्ने र सशर्त निर्वाचनमा खट्ने पुरानो रोग यहाँका कुनैपनि राजनीतिक दलहरुमा देखिएन । यस्तो सकारात्मक प्रभाव भर्खरै समीकरण भएको नेकपामा बढी देखियो । निर्वाचनका बेलामा पद, पैसाको लोभगर्ने खराब परम्परा तोडन नेकपा अग्रसर रह्यो । स्व.रविन्द्र प्रतिको सहानुभुति : यो क्षेत्रमा कम्युनिष्ट पार्टीले बिजय हासिल गर्नुमा स्व.रबीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनु पनि एक हो । पार्टीले त्यहि सहानुभूतिको मत बटुल्न उहाँको श्रीमती बिद्या भट्टराई अधिकारीलाई नै उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो । यद्यपि, सहानुभुति मात्रै बिजयको आधार थिएन, स्वयम उम्मेदवार बिद्या भट्टराई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि योग्य थिईन । कास्की जिल्लाको राजनीतिका लागि नयाँ ठहरिएकी उनलाई सहानुभूतिले राम्रो राहत दियो ।
पार्टीको सरकार हुनुको मनो बिज्ञान : सरकार पतन भएका समयमा बाहेक अन्य अवस्थामा आम नागरिकले सरकारबाट आश गरेका हुन्छन् । प्रतिपक्षले जतिसुकै प्रचार गरेपनि बर्तमान सरकारको चरित्र पतन भएको बलियो आधार देखिन्न । नेपालका अन्य ठाउँका निर्वाचन भन्दा कास्कीका जनताले स्थानीय स्तर, प्रदेश र संघीय सरकारको रवैया हेरि रहेका छन् । जहाँ स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधिहरुले राम्रा काम गर्न सकेनन् त्यहाँ जनमत प्रतिपक्षपट्टि लाग्छ । नेपाली जनताको मनोबिज्ञान अव कतै सरकार बिरुद्ध जानु हुन्न कि ? भन्ने छैन । तर सरकारी काम कारवाहीको मूल्याँकन जनताको नजरमा नकारात्मक भएको देखिएन ।
नेपाली कांग्रेसको पराजयका कारण :
परंपरागत सांगठनिक शैली : नेपाली कांग्रेस अहिले पनि ‘मेरा बाबुले घिउ खाएका थिए मेरो हात सुङसुङ’ भन्ने उखानबाट माथि नउठेको आरोप छ । तीन सय चौसठ्ठी दिन निदाउने र एक दिन मात्रै जागाहुने नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक शैली अहिले पनि उस्तै देखिन्छ । अहिले नेपाली कांग्रेसका समर्थकहरुले नै त्यस्तो आलोचना गर्न थालेका छन । परिवर्तित परिस्थिति बमोजिम संगठनको नयाँ संरचनालाई सक्रियपार्न सकेनन । टिकट कसले पाउने हो अघिल्लो दिन सम्म निधो भएन ।
उम्मेदवार छनौटमा ढिलाई : नेपाली कांग्रेसले कास्की जिल्लामा उम्मेदवार छनौटगर्न ढिलो गर्यो । यसलेगर्दा निर्वाचनको कार्ययोजना पनि ढिलो बन्यो । ढिलो बनेका कार्ययोजनाहरु प्रभावकारी रहदैनन भन्ने हेक्का पाटी नेतृत्वले राखेन । फलत त्यसको असर निर्वाचनमा पर्यो ।
स्थानीय जनकार्यको कमी : नागरिकको चाहना हुन्छ आफ्ना दैनिक क्रियाकलापमा जनप्रतिनिधि मात्रै होईन राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले साथ दिउन । यसमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु कम्युनिष्ट पार्टीका तुलनामा पिछडिए । प्रदेश सभा वा संघीय राज्यको संरचनामा प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला स्तरीय नेताहरु धेरैजसो बाहिरबस्ने बिदेश भ्रमणलाई लम्बाउने गरेको गुनासो नेपाली कांग्रेस बृत्तबाट आएको छ । निर्वाचनमा पराजय ब्यहोर्नु पर्दा यो पनि एउटा कारण बन्यो ।
सरकारी पहुँचबाट अलगिनु : सरकारमा बसेर निर्वाचन लडदा दलहरुले जनमत सरकारी दलका पक्षमा देखाउने गरेकाछन । पञ्चायती ब्यवस्थामा हुर्केको त्यो संस्कारको अनुकरण बहुदल आए पछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले समेत गर्न थाले । परिणाम कहिले सुल्टो आयो र कहिले उल्टो । जनताको मनबाट त्यसको मनो बैज्ञानिक प्रभाव हट्न सकेको छैन । सरकारप्रति जहिले पनि नतमस्तक हुने र सत्ताको फाईदा लिने भुंईफुट्टा बर्ग अहिले पनि त्यतै तिर लाग्यो । यो प्रबृत्ति दोहरिने गरेको छ । अहिले नेपाली कांग्रेसलाई उसले सहयोग नगर्नु पनि स्वभाविकै हो ।
चुनावमा उम्मेदवारको निष्ठाको ईतिहासको उल्लेखगर्नु जायज हो । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले त्यो दायित्व पूरा गरेका हुन । तै पनि, कांग्रेसले समग्रतामा हार्‍यो । चुनावमा पराजयका बारे सोध्दैगर्दा एक जना कांग्रेस कै मित्रले भने खेमराजले कार्यकर्तालाई जाँड रक्सी त के चिया समेत खुवाउन सकेनन् । यो महंगो चुनाव लड्ने हैसियत खेमराजजीले राख्न सकेन भन्ने सन्देश दिंदै गर्दा नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजबाद समेत धरौटमा रहेको महसूस भयो । मतान्तर धेरै थोरै जति भएपनि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार खेमराज पौडेलले कम्युनिष्ट पार्टीका बिजयी उम्मेदवार बिद्या भट्टराईलाई बिजयको माला पहिर्याउँदै कार्यकालको सफलताको शुभकामना दिदैं गर्दा नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन हारे पनि खेमराज बिजयी भएको कास्केली जनताले महसूस गरेका छन् । (लेखक- प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी हुन्)